बीपी र भारतका तीन प्रदेश
बीपी र भारतका तीन प्रदेश कुलचन्द्र वाग्ले
यसपटक भारतका दुई प्रदेशका राजधानीहरू घुम्ने अवसर मिल्यो । बिहारको पटना र पश्चिम बंगालको कोलकाता । प्रसंग बीपीले नेपाली कांग्रेस स्थापना र आधुनिक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्न उपयोग गरिएका मध्ये त्यहाँ स्थित ऐतिहासिक ठाउँको लेखाजोखा संग्रह गर्नु थियो । दिक्कलाग्दो नेपाली राजनीतिभन्दा यसपटक यही विषय लेखाइको रोजाइमा पर्यो ।
बीपी संग्रहालय, सुन्दरीजलका अध्यक्ष परशुराम पोखरेलको फोन आयो – पर्सीपल्ट यहाँबाट पटना र कोलकाताका लागि प्रस्थान गर्ने । दिउँसो बाटोमा हिँड्दै गर्दा मोबाइल फोन सम्पर्कको एकैछिन द्विविधामा परे पनि भ्रमण उद्देश्यले उत्साहित गर्यो ।
यही चैत २ गते बिहान हामी दुई सिमरा विमानस्थलमा ओल्र्याैँ र रक्सौल हँुदै बसको यात्राबाट साँझ पटना पुगियो ।
देशको आन्तरिक राजनीतिको बोझिलो दिक्दारीबाट छिमेकी देशको दुई राज्यको एक साता लामो घुमाइमा फरक हलुंगो अनुभूतिको हुने नै भयो । यी सात दिनमा देशको राजनीतिले केही आशालाग्दो कोल्टो फेर्छ कि भन्ने झिनो आशा फर्किएर यहाँ आइपुग्दा झन् गन्जागोल र अनिश्चित एवं थप भयग्रस्त भएको रहेछ । कम्युनिस्ट दल र सरकारले बिथोलेकोे राजनीतिको संकट देश, जनता र संवैधानिक लोकतन्त्रमाथि तरबार बनाएर झुन्ड्याइएको निरन्तरता अरु कठोर भएछ । निकासको कुनै लक्षण देखिएको छैन ।
भ्रमण उद्देश्यको केही अंश भए पनि प्राप्त गर्ने बोझ त थियो नै । भोलिपल्टैदेखि बीपी र नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध त्यहाँका ठाउँमा पुग्न थालियो, स्थानीय नेताह।ूसँग भेटघाट पनि । पहिलो रोजाइ बीपीको सालिक रहेको पटनाको गोलघर पार्क थियो । अध्यक्ष पोखरेलका यहाँका साथी प्रा. डा. नवलकिशोर चौधरी र राजेशकुमार दासको साथ सहयोग प्राप्त भयो ।
गोलघर पार्कको उत्तरपश्चिम कुनामा स्थापित पूर्ण कदको बीपीको सालिक उनकी धर्मपत्नी सुशीला कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यमा बिहारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवले अनावरण गरेका रहेछन् । स्तम्भमा लेखिएको छ । यसअघि संग्रहालयको टोली त्यहाँ पुगेर गरेको प्रयत्नले केही सफाइ भएको रहेछ । अझै पनि फोहर र यो क्षेत्रको दुरवस्था नै देखियो ।
पहिलो प्रयत्न सालिक क्षेत्रको संरक्षण, सफाइ र सुरक्षाको विषयमा केन्द्रित गरियो । यहाँका सबै भेटघाट र कुराकानी यही विषयबाट सुरु गरिन्थ्यो । परिणाम, हाम्रो आग्रहप्रति भेटिएका नेता संवेदनशील भएको अनुभूति भयो । नेपाली टोलीको आग्रह जायज छ र त्यो पूरा गरिने भन्ने विश्वास हामीलाई दिइयो ।
प्रा. डा. चौधरी ‘बीपी कोइराला सेन्टर फर नेपाल स्टडिज सेन्टर’ (बीपी कोइराला नेपाल अध्ययन केन्द्र ) स्थापना गर्ने अध्यक्षसमेत रहेछन् । उनको दुखेसो केन्द्रलाई आवश्यक गति दिन नसकेकोमा रहेछ । उनकै सहयोगमा बिहारका शिक्षामन्त्री विजयकुमार चौधरीसँग भेटवार्ता भयो । हाम्रो भनाइलाई मन्त्री चौधरीले अत्यन्त गम्भीरता साथ सुने र आश्वासन दिए ¬– बीपीको सम्मानमा बिहार सरकारका सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनेछन्, मेरो प्रयत्न रहनेछ ।
कुराकानीमा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भएको भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा बीपी र नेपालको नेताहरुको ऐतिहासिक सहभागिता, सहयोग, जनस्तरमा रहेको दुई देशबीचको सम्बन्ध हाल स्खलित हुँदै गएको र बीपी भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद लगायतसँग स्वतन्त्रता संग्राममा जेल बसेका प्रसंगहरू जोडिएका हुन्थे ।
बीपीलाई अत्यन्त आदर गर्ने प्रा. डा. चौधरीले भने – नेपाल भारत सम्बन्ध संस्कृति, प्रकृति र सहज आवाजाहीमा मात्रै सीमित छैन, राजनीति, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रसँग पनि जोडिएको छ । त्यही दिन त्यहाँका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको सचिवालयमा पनि हाम्रो उद्देश्य लिखित लामो अनुरोध पत्र दर्ता गराएका हौँ । विधानसभा बैठक चलिरहेकाले यहाँका मन्त्री, सांसद् अत्यन्त व्यस्त पाइए । थाहा पनि भयो यिनीहरू विधानसभा बैठकलाई अत्यन्त महत्त्व दिँदा रहेछन् र बैठकमा ठीक समयमा पुग्दा रहेछन् ।
हामीले भेटेको दुई घन्टापछि नै शिक्षामन्त्री चौधरीको तर्फबाट फोन आयो पटना नगर निगमका प्रधान सचिव आनन्द किशोरलाई भेट्ने । मन्त्रीले उनलाई सबै बताएका रहेछन् र केही समयको प्रतीक्षापछि निगमको कार्यकक्षमा उनीसँग हाम्रो भेटवार्ता भयो । उत्तिखेरै संस्कृति सचिव दीपकलाई जो गोलघरको व्यवस्थापनसँग पनि सम्बन्धित रहेछन् उनले त्यहीँ बोलाए । कोरोना प्रतिरोधको लागि बनाइएको सिसाको सुरक्षा कवच (कोठा)मा माइकको सहाराले पौने घण्टा लामो छलफलमा धेरै कुरा भए । उनले विश्वास दिए – तपाईँहरुको जायज चासो पूरा गरिनेछ ।
यही क्रमको अर्को दिन बिहान हामी एमएलसी( मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ काउन्सिल) का सदस्य प्रा. डा. वीरेन्द्रनारायण यादवको सरकारी निवासमा पुग्यौँ । यहाँलगायत पुगेका अन्य सबै ठाउँमा पाएको सद्भाव, स्नेह र सम्मान स्मरणीय रह्यो । एमएलसी केन्द्रको राज्यसभा जस्तै वा प्रदेशको उपल्लो सदन मानिने रहेछ । काउन्सिल सदस्य प्रा. डा. यादव यहाँको जनता दल युनाइटेड (जेडीयु)बाट मनोनीत प्रतिनिधि रहेछन् र उनी बीपीको बारेमा केही जानकार पनि ।
विधान सभामा रहेका प्रतिनिधि सांसद्को संख्याअनुसार एमएलसी मनोनित गर्ने व्यवस्थाअनुरूप यसै दिन सत्ता साझेदार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) र जेडीयुबाट बाह्र जना एमएलसी मनोनित भएको खबर भोलिपल्ट पटना संस्करणको हिन्दुस्तान पत्रिकामा पढ्यौँ । यो पत्रिकाले अघिल्लो दिन हाम्रो भ्रमण उद्देश्यसहितको समाचार पनि छापेको थियो ।
प्राध्यापक वा प्रोफेसर भन्नेबित्तिकै यहाँको समाजले गर्ने सम्मान हामीले नजिकैबाट अनुभव गर्यौँ । प्राध्यापकको उच्चारण सुन्नासाथ केही हच्किएको, दबिएको लवजमा बोल्ने । प्राध्यापक भन्न गौरव गर्ने नवलकिशोर चौधरीले मन्त्रीदेखि सञ्चार गृहमा र अन्यत्र पाएको सम्मानको ठाउँले नै हामीले बुझ्यौँ । एमएलसी यादव पनि प्रा. भन्न, भनाइन रुचाउने रहेछन् ।
एमएलसी प्रा. डा. वीरेन्द्रनारायण यादवले भने – आज बैठकमा यो विषय राख्नेछु । अहिले बैठकमा जान हतार छ । साँझ आउनु होला । साँझ उनले बीपी र सालिकको विषयसँगै नेपाल –भारत सम्बन्धको सूचना, जानकारी एमएलसी बैठक समक्ष आफूले प्रस्ताव गरेको बताए । त्यसबेला सो बैठकमा उपस्थित उपमुख्यमन्त्रीसमेत सदस्य सबैले उनको सूचना, जानकारीलाई प्रशंसा र समर्थन गरेकोबाट उनी पुलकित सुनिन्थे ।
दिउँसो बिहटा विमानस्थल पुग्यौँ । साथमा प्रा. डा. चौधरी र राजेश । यो विमानस्थल नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लागि बर्माबाट हतियार ल्याएर ओरालिएको ऐतिहासिक प्रसंगसँग जोडिएको छ । त्यसबेला सानो र अव्यवस्थित विमानस्थलका केही सुरक्षा गार्डलाई मासु खान खसी किन्न पठाएर बीपीले हतियार ओराल्ने र नेपाल भित्र्याउने चाँजोपाजो मिलाउनु भएको रहेछ । त्यसताका यहाँका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हा रहेछन् ।
पटना सहरबाट झण्डै २५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बिहटाको यो विमानस्थल अहिले भारतीय वायु सेना स्थल, बिहारमा रुपान्तरित रहेछ । अनि त त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कडा हुने नै भयो । यहाँ पनि हाम्रो ध्येयको लिखित पत्र दर्ता गरायौँ तर निकै आग्रहपछि यो काम सम्भव भयो । दिउँसोको खाना हिरो साइकलको पटना कारखानाको सौजन्यमा उसैको क्यान्टिनमा भयो । प्रा. डा. चौधरीका प्रियपात्र कारखानका प्रमुख प्रशासक रहेछन् । संग्रहालयको टोली भएकाले यहाँको पटना संग्रहालयको भ्रमण पनि गर्यौँ र गान्धी संग्रहालयमा पनि पुग्यौँ । भाडामा लिएको मोटरको कारण घुमाइ सहजै थियो ।
चार दिनपछि कोलकताका लागि रेलबाट प्रस्थान गरियो । बाह्र घन्टाको यात्रापछि साँझ जसेर रोड, सतगाची स्थित होटलमा बस्यौँ । यहाँको समाजवादी संगठनका अध्यक्षले एकदिनका लागि साथ दिन फुर्सद निकाले । भोलिपल्ट उनीसँगै भवानीपुरको खालसा स्कूल पुग्यौँ जहाँ बीपी कोइरालाले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गर्नुभएको थियो । स्कूलका प्रमुख प्रशासक श्रीमती रायसँग भेटवार्ता भयो । उनले त स्कूल स्थापनादेखिका निर्णय पुस्तिका खोज्न लगाएर टेवलमा राखेकी रहिछन् । सन् ०४७ मा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका कारण एक वर्ष विद्यालय पूरै बन्द भएको रहेछ ।
ती रजिस्टर ‘पुस्तिका’मा नेपाली कांग्रेस स्थापनाको निर्णय लेखिन त सम्भव थिएन । यो स्कूलको निर्णय थिएन । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाका लागि ठाउँ, कोठा उपलब्धमात्र गराइएको अनुमान सहजै हुने नै भयो । नेपालसँग आफ्नो स्कूलको पनि इतिहास जोडिएका थाहा पाएर प्रमुख राय अत्यन्त खुशी भइन् । उनी मनिषा कोइराला (अभिनेत्री) को नाउँ लिँदै थिइन् । दिउँसोको खाना आफँैले व्यवस्था गर्ने निम्ता गरिन् र आफ्नै गाडीमा होटलसम्म पुर्याउन लगाइन् ।
यहाँबाट पार्क स्ट्रिटमा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेरको भव्य कनक भवनमा पुग्यौँ । भवनको भव्यता अहिले पनि ताजै रहेछ । भवन क्रेताले कनक ट्रस्ट बनाएर यसको सञ्चालन गरिरहेका रहेछन् । बीपी र सुवर्ण शम्शेरको ऐतिहासिक सम्बन्ध सबैको जानकारीमै छ । त्यहाँका पब्लिक सम्पर्क अधिकृतको भनाइमा कनक भवन सम्पदा (हेरिटेज) कै हैसियतमा संरक्षित छ र गरिनेछ ।
पछि पहिलेको टाइगर सिनेमा हलमा पुगियो । जहाँ बीपीले स्थापना गरेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र सुवर्ण शम्शेरले बनाउनु भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको एकता (२००६ सालमा) घोषणा भएको थियो । महावीर शम्शेरको यो सिनेमा हल बिक्रीपछि अहिले सिटी मार्केट बनाइएको रहेछ । ऐतिहासिक निसानी चाहिँ यहाँ केही थिएन, कनक भवनको जस्तो । यहाँको भारतीय संग्रहालयमा पनि पुगियो । सतीको दायाँ पाउको औंला पतन भएको मानिने कोलकाताको प्रसिद्ध कालीका मन्दिरमा भने त्यहाँका पण्डाको व्यवहारले कालीको दर्शनलाई नै ुहलुवामा बालुवाु जस्तै बनायो ।
उत्तर प्रदेशको बनारस जाने अवसर जुरेन । भारतमा दोस्रो चरणको कोभिड फैलावटले स्थिति असहज हुने अनुमान भयो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र बीपीको राजनीतिक यात्रासँग बनारस, पटना र कोलकाता जोडिएका प्रमुख नगर हुन् । यी नगर तीन प्रदेशमा पर्छन् । उत्तरप्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगाल यी तीनै प्रदेशको सीमाना नेपालसँग जोडिएको छ ।
बीपी संग्रहालय, सुन्दरीजलको बीपी सम्बन्धी वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) निर्माण गर्ने उद्देश्यमा जुटेको छ । भ्रमण यही कारण भएको थियो । भेटघाटको सबै ठाउँको सम्बन्धित निकाय प्रमुखहरुसँग डकुमेन्ट्री टोली नेपालबाट आउँदा सहयोग प्राप्त होस् भन्ने रह्यो र सबैको जवाफ सकारात्मक । अनिर्णित चाहिँ विहटा वायु सेना स्थलको रह्यो । ती ठाउँको अवस्थिति र सम्बन्ध सूत्र संग्रह गरियो । फर्किएर आउँदा सोचेभन्दा धेरै उपलब्धि भएको लागिरहेको छ, पर्याप्त नभए पनि ।